Xulalka Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala adkaan waayay.
Bar bar dhac aan qolana wax Gool ah la imaan ayuu ku soo idlaaday kulan ciyaareed xiisa badan oo dhexmaray xulalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Ciyaartoyda labadaan qaran ee walaalaha ayaa muujiyay ciyaar wanaag, iyo dadaal dheeriya balse midkoona uma suurta galin in uu Gool dhaliyo. Cayaarta ayaa loogu tartamayaa Koobka bariga iyo bartmaha Africa ee […]
Bar bar dhac aan qolana wax Gool ah la imaan ayuu ku soo idlaaday kulan ciyaareed xiisa badan oo dhexmaray xulalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Ciyaartoyda labadaan qaran ee walaalaha ayaa muujiyay ciyaar wanaag, iyo dadaal dheeriya balse midkoona uma suurta galin in uu Gool dhaliyo. Cayaarta ayaa loogu tartamayaa Koobka bariga iyo bartmaha Africa ee [&#8230;]